Uxwebhu oluyimfihlo luqinisekisa ukuba i-Amazon Prime Video ihlawula i-50% ikhomishini encinci kwiVenkile ye App | IPhone iindaba
Uxwebhu oluyimfihlo luqinisekisa ukuba i-Amazon Prime Video ihlawula i-50% ikhomishini encinci kwiVenkile ye App
UKarim Hmeidan | | Izaziso
Siyaqhubeka nesepha opera yeeKhomishini zika-Apple kubaphuhlisi. UApple ungumnini weVenkile ye App, kodwa abasebenzisi baya besebenzisa ii -apps zomntu wesithathu. Ngaba kusengqiqweni ukuba iApple yenza imali enkosi kubaphuhlisi? Ngaba iikhomishini zihlukumeza? Into esiya icaca ngakumbi kuthi kukuba ayinguye wonke umntu ohlawula ikhomishini enye, kwaye siye sakuqinisekisa oku ngoxwebhu oluyimfihlo olubonisa indlela iAmazon eya kuhlawula ngayo iikhomishini ezingaphantsi kwama-50%. Emva kokutsiba sikubonisa isivumelwano esityikitywe yiApple kunye neAmazon ngaphambi kokumiliselwa kweapp yeVidiyo yeAmazon ye-iOS ...
Okokuqala kukuxelela ukuba oku kubonakala kulwazi oluthembekileyo, Uvezwe kwityala ebelibanjwe kwiveki ephelileyo apho uApple watyholwa khona ngamandla odwa ekusebenzeni kweVenkile yeApple. Kule imeyile siyazibona iimeko ezaziza kuthunyelwa nguEddy Cue kuJeff Bezos ekupheleni kuka-2016. I-imeyile eya kubonisa indlela iApple engabaphathi ngayo bonke abaphuhlisi ngokufanayo noTim Cook.
Ndikonwabele kakhulu ixesha lethu kunye.
Nazi iinkcukacha zento esiyixoxe malunga neNkulumbuso yeVidiyo.
I-Amazon Prime Video App kwi-iOS nakwi-Apple TV.
Ikhomishini ye-15% yabathengi ababhalisa besebenzisa usetyenziso (besebenzisa indlela yeNtlawulo yeVenkile yeApp), akukho khomishini yabathengi esele babhalisile.
I-Siri kunye ne-Spotlight iya kubonelela ngemethadatha yomxholo weVidiyo yeNkulumbuso.
Inkxaso "Jonga [igama lomxholo]" ngeSiri, oku kuyakwazisa i-PRime Video app enomxholo oceliweyo.
Inkxaso kwinkqubo entsha yeTV ukubonisa iinkqubo / iziqendu ezinonxibelelwano ngqo kwi-Prime Video app.
Umxholo osuka kwezinye iinkonzo zokusasaza (iXesha lokubonisa) kwiAmazon Prime Video, i-15% ikhomishini ukuba umntu obhalisileyo ubhalisile ngathi kuqala.
Uthethathethwano olunxulunyaniswe neengxoxo zerhafu.
Kufuneka kuthiwe oku I-15% iyafikeleleka kubo bonke abasebenzisi emva konyaka omnye kwiVenkile ye App, phambi konyaka kuya kufuneka bahlawule i-30% yengeniso yabo. I-Prime Prime yeAmazon ayikho kude nomzobo kodwa into ehlekisayo kukuba ukusukela ngosuku lokuqala baye banekhomishini ye-15%. Kufanelekile ukuba ivenkile yeapps yeyakwa-Apple, ukuba bakhe iziseko apho abaphuhlisi bafumana khona ingeniso, kodwa okungafanelekanga kukuba baxoka besithi bahlawulisa wonke umntu ngokulinganayo. Abayenzi, yenza wuphi umahluko, kutheni bengavumi? Ewe kunjalo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba iApple ineemveliso kwiAmazon, Yeyiphi ipesenti ethengisa izinto ezinkulu egcina kwiintengiso zika-Apple?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Uxwebhu oluyimfihlo luqinisekisa ukuba i-Amazon Prime Video ihlawula i-50% ikhomishini encinci kwiVenkile ye App
IHuawei igqithe i-Samsung okokuqala njengomthengisi omkhulu we-smartphone emhlabeni
I-Telegram igxeka i-Apple ngokuzimela phambi kwe-European Union